Apple Watch Hermes ၏လက်ပတ်နာရီများကိုယခုရရှိနိုင်သည် ငါက Mac ပါ
Apple Watch Hermèsပုံစံကြိုးများကိုအွန်လိုင်းတွင်ရနိုင်သည်
Peter Rhodes | | Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့
Apple ရဲ့ Apple Watch အတွက်သိုင်းကြိုးရွေးချယ်စရာတွေမပေါ်လာခင်အချိန်ကဒီကိစ္စဟာပြwasနာဖြစ်တာပေါ့။ အနည်းဆုံးတော့ Apple အတွက်ပစ္စည်းဝယ်ယူတာထက်ပိုက်ဆံပိုရပါတယ်။
သို့သော်အခြားထုတ်လုပ်သူများကထိုကိတ်မုန့်ကိုဝယ်ချင်ကြသည်။ သူတို့လုပ်ခဲ့သည့်အရာက Apple ကစျေးနှုန်းချိုသာစွာတင်ဆက်သည့်ကြိုးများကိုပုံတူပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်မဖြစ်သင့်သည်မှာရှင်းပါသည်။ သို့သော် fluoroelastomer သိုင်းကြိုးအတွက် ၅၆ ယူရိုအစား ၈ ယူရိုကိုပေးရခြင်းနှင့်မတူပါ။ ၂၄ ယူရိုဆိုတာအက်ပဲလ်မှာယူရို ၁၅၀ ကျော်ကုန်ကျမယ့်ကြိုးတစ်ချောင်းအတွက်။
အခုဒီဆောင်းပါးမှာငါတို့ပြောမယ့်အရာကဒီတရုတ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာဆက်လုပ်သွားပြီးHermèsကုမ္ပဏီဒီဇိုင်းဆွဲထားတဲ့ကြိုးတွေကိုလည်းကူးယူလိုက်ပြီ။ Apple Watch Hermes ၏သီးသန့်ပုံစံအတွက်။
ဒီကြိုးတွေကိုအာရှကုမ္ပဏီကြီး Aliexpress ရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာတွေ့နိုင်တယ်။ ဤရွေ့ကားမူရင်းနှင့်တူညီသော်လည်းအလွန်နိမ့်သောစျေးနှုန်းများဖြင့်ကြိုးကြိုးများဖြစ်သည်။ အဖွင့်စာပိုဒ်မှာငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ဒီပစ္စည်းတွေငါတို့သိတယ် သူတို့ဟာဘယ်တော့မှHermèsအမှတ်တံဆိပ်အသုံးပြုတဲ့အရည်အသွေးတွေနဲ့တူညီမှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာရွေးချယ်စရာကောင်းတယ် ငါတို့အဘို့အကြိုးများအဘို့အကံဇာတာထွက်မဖြုန်းနိုင်သူကိုသူတို့အဘို့ Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့.
စကားလုံးများနှင့်ရှာဖွေခြင်းအားဖြင့် Aliexpress စတိုးတွင်သင်ရှာတွေ့နိုင်သည့်ရွေးချယ်မှုအချို့ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။Apple Watch တီးဝိုင်း ၁: ၁).
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ » Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ » Apple Watch Hermèsပုံစံကြိုးများကိုအွန်လိုင်းတွင်ရနိုင်သည်
ဤသည် Apple ခရစ္စမတ်၏ nuncio ဖြစ်ပါတယ်